Психология | Полезная информация для всех - Часть 8
ငါကလူအားဆင့်ဆိုရမည်မှာဘယျအရာမသိရပါဘူး။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ကျနော်တို့ပြောပါနှင့်နားမထောင်ကြဘူး။ ပြီးတော့ကိုသင်စကားပြောအရှိဆုံးအသိဉာဏ်နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လူကိုချစ်သောသူသောကြောင့် ...
ကြင်နာစွာခေတ္တ Scientology ၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖော်ပြ။ သို့မဟုတ် Scientology အပေါ်စိတ်ဝင်စားဖို့ပစ္စည်းပစ္စယမှ link တစ်ခု။
ကြင်နာစွာခေတ္တ Scientology ၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖော်ပြ။ သို့မဟုတ် Scientology အပေါ်စိတ်ဝင်စားဖို့ပစ္စည်းပစ္စယမှ link တစ်ခု။ Scientologists အဖွဲ့အစည်းများများစွာကိုယ်စားပြုမော်စကိုနှင့်ရုရှားနိုင်ငံများတွင်အဖွဲ့အစည်းများအားကောင်းတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံမှာစကေး: မော်စကို၏ Scientology ၏ဘုရားကျောင်း ...
Что такое аффект? Аффе#769;кт (лат. Affectus страсть, душевное волнение) относительно кратковременное, сильно и бурно протекающее эмоциональное переживание: ярость, ужас, отчаяние, гнев и др (УК РФ: аффект — внезапно возникшее сильное…
သငျသညျစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအကြံပေးနိုင်မလား? သငျသညျတောအုပ်၌တစ်စုံတစ်ဦးကိုသွားဆိုပါစို့။ အဘယ်သူဖြစ်နိုင်မည်နည်း LesnikVy တောအုပ်မှတဆင့်သွားနှင့်တိရစ္ဆာန်အနီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ပါ။ တိရိစ္ဆာန်အမျိုးအစားကဘာလဲ? ...
အဘယ်အရာကိုကအာဃာတဝတ်ဆင်ရန်ကိုဆိုလိုသလဲ ဤသည်ကလဲ့စားချေဘို့အမျက်ဒေါသ, ရန်လိုမုန်းတီးမှု, ပေါက်အစီအစဉ်များထဲ၌တည်ဖို့အငွိုးထားခဲ့ပါဆိုလိုသည်။ သမိုင်းကနေမြင်နိုင်ပါသည်အမျှမူလကဟူသောအသုံးအနှုနျးဟာပကတိအဓိပ်ပာယျရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ၌ထငျရှား ...
anoreksichkoy ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ထိုသို့သောအစွန်းရောက်မလိုအပ်လျက်ရှိသည်။ Anorexia ရုပ်ဆိုးနှင့်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ အစားအစာထဲမှာ emetic ရောနှော။ ငါ သာ. ကောင်း၏သင်၏နှုတ်တက်ချုပ်တစ်ဦးသတိလစ်အဆင့်တွင်အရပ်ဌာန၌အစာအာဟာရမှရက်သတ္တပတ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏စုံတွဲတစ်တွဲစဉ်းစား ...
schizoid နှင့် schizophrenic ကတူညီတဲ့အရာသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာဖြစ်သနည်း
schizoid နှင့် schizophrenic ကတူညီတဲ့အရာသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာဖြစ်သနည်း တစ်ဦးအဖြစ်နှင့်ပဲ schizo ischo)))) သင်တန်း၏ကွဲပြားခြားနားသော-မဟုတ် psih.bolnitse အတွက် schizoid နှင့် schizophrenic-ကုသအရူးရှိပါတယ်, မိမိတို့ရောဂါဗီဇမှတဆင့်ကူးစက်သောနှင့် shizody-အဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ...
ယခင်စာမျက်နှာ စာမျက်နှာ 1 ... စာမျက်နှာ7စာမျက်နှာ 8
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,347 စက္ကန့်ကျော် Generate ။